4 N’ikpeazụ, ụmụnna anyị, anyị na-arịọ unu, na-adụsi unu ọdụ ike site n’Onyenwe anyị Jizọs, dị nnọọ ka unu natara ntụziaka n’aka anyị banyere otú unu kwesịrị isi na-eje ije,+ na-emekwa ihe dị Chineke ezi mma, dị nnọọ ka unu na-eje ije n’eziokwu, ka unu wee na-eme ya n’ụzọ zuru ezu karị.+
2 N’ihi na unu maara iwu+ ndị anyị nyere unu site n’aka Onyenwe anyị Jizọs.
3 N’ihi na ihe Chineke chọrọ bụ ka e doo unu nsọ,+ ka unu zere ịkwa iko;+
4 ka onye ọ bụla n’ime unu mara otú ọ ga-esi jide arịa+ nke ya n’ịdị nsọ+ na nsọpụrụ,
5 ọ bụghị iji anyaukwu na-enwe agụụ mmekọahụ,+ ụdị nke ahụ mba+ ndị na-amaghị Chineke+ na-enwe;
6 ka onye ọ bụla ghara iru n’ókè nke imebi ihe na ịmanye aka n’ihe ndị ruuru nwanna ya n’okwu a,+ n’ihi na ọ bụ Jehova na-enye ntaramahụhụ maka ihe ndị a niile,+ dị nnọọ ka anyị gwara unu na mbụ, gbaakwara unu àmà nke ọma.+
7 N’ihi na Chineke kpọrọ anyị ka anyị bụrụ ndị dị nsọ,+ ọ bụghị ka anyị bụrụ ndị na-adịghị ọcha.
8 Ya mere, onye na-ajụ,+ ọ bụghị mmadụ ka ọ na-ajụ, kama ọ bụ Chineke,+ bụ́ onye tinyere mmụọ nsọ+ ya n’ime unu.
9 Otú ọ dị, n’ihe banyere ịhụnanya ụmụnna,+ ọ dịghị unu mkpa ka anyị na-edetara unu akwụkwọ, n’ihi na unu onwe unu bụ ndị Chineke na-akụziri+ ịhụrịta ibe unu n’anya;+
10 n’eziokwu, unu na-emekwara ya ụmụnna niile nọ na Masedonia niile. Ma anyị na-agba unu ume, ụmụnna anyị, ka unu na-eme ya n’ụzọ zuru ezu karị,
11 ka unu kpebiekwa ibi ndụ n’ụzọ dị nwayọọ+ na ilekwasị anya n’ihe unu na-eme,+ ka unu jirikwa aka unu na-arụ ọrụ,+ dị nnọọ ka anyị nyere unu n’iwu;
12 ka unu wee na-eje ije n’ụzọ kwesịrị ekwesị+ n’ihe metụtara ndị nọ n’èzí,+ ka ihe ọ bụla gharakwa ịdị na-akpa unu.+
13 Ụmụnna anyị, anyị achọghịkwa ka unu ghara ịma ihe banyere ndị na-ada n’ụra ọnwụ;+ ka unu wee ghara iru uju dị nnọọ ka ndị ọzọ si eru, bụ́ ndị na-enweghị olileanya.+
14 N’ihi na ọ bụrụ na okwukwe anyị bụ na Jizọs nwụrụ, sikwa n’ọnwụ bilie,+ otú ahụkwa, Chineke ga-akpọlite ndị dara n’ụra ọnwụ n’ime Jizọs ka ha soro Jizọs.+
15 N’ihi na nke a bụ ihe anyị na-agwa unu site n’okwu Jehova,+ na anyị ndị dị ndụ, ndị a hapụrụ ruo n’oge ọnụnọ Onyenwe anyị,+ agaghị ebu ndị dara n’ụra ọnwụ ụzọ ma ọlị;
16 n’ihi na Onyenwe anyị ga-esi n’eluigwe rịdata.+ Ọ ga-eji olu dara ụda kpọọ òkù, bụ́ olu onyeisi ndị mmụọ ozi,+ jirikwa opi nke Chineke.+ Ndị nwụrụ anwụ bụ́ ndị ha na Kraịst dị n’otu ga-ebukwa ụzọ bilie.+
17 E mesịa, anyị onwe anyị bụ́ ndị dị ndụ, ndị a hapụrụ, a ga-eburu+ anyị na ha+ gaa n’ígwé ojii+ izute+ Onyenwe anyị na mbara igwe; otú a ka anyị na Onyenwe anyị ga-anọ mgbe niile.+
18 Ya mere, werenụ okwu ndị a na-akasirịta ibe unu obi.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D52%26Chapter%3D4%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl